Turkey: Inqilaabkii Militari Oo Fashilmay, Tirada Ciidammada La Qabtay, Inta La Dilay Iyo Xaalada Guud Ee Dalkaas | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Turkey: Inqilaabkii Militari Oo Fashilmay, Tirada Ciidammada La Qabtay, Inta La Dilay Iyo Xaalada Guud Ee Dalkaas
Ankara (Hubaal)- Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, ayaa ka sheegay goob fagaare dadweyne aad u tiro badan isugu yimaadeen in xukuumaddiisu dalka gacanta ku hayso, kadib markii saacado yar uun uu fashilmay inqilaab ay isku dayeen koox ka mid ah millateriga dalkaas.
Madaxweyne Erdogan oo magaalada Istanbul ka soo gaalay magaalo xeebeedka Marmaris, kadib markii Ra’isal-wasaare Binali Yildirim uu telefiishanka Qaranka ee NTV u sheegay saaka in xaalada dalku degen tahay. Ku-simaha Taliyaha Ciidanka Millateriga Mr. Umit Dundar ayaa warbaahinta u sheegay in 104 xubnood oo ka mid ah ragga isku dayey afgambiga la dilay, halka 90 kale oo 47 ka mid yihiiin shacab ay hawlgalkaas ku dhinteen.
Xukuumadda Turkiga ayaa sheegtay in 2,839 askari oo millateriga ka mid ah xabsiga loo taxaabay, halka 1,440 kalena la dhaawacay.
Xulusi Akar oo ah Madaxa Shaqaalaha (Chief of Staff), ayaa ciidammada dawladda taageersan ka soo badbaadiyeen xarun millateri oo Ankara ku taala, kadib markii afduub ahaan loo kaxaystay.
Madaxweyne Erdogan oo shir jaraa’id qabtay, ayaa sheegay dadka ku kacay falka isku dayga afgambiga ah ay galeen dambi khiyaamo qaran ah, abaalkoodana la marin doono, isaguna uu dadkiisa las ii joogi doono.
“Wax yar uun kadib markii aan ka tegay Marmaris, waxa la ii sheegay in ay qarxiyeen goobtii aan joogay, waxaan u malaynayaa in ay u maleeyeen in aan wali ku suganahay goobaha aan joogay,” ayuu yidhi Madaxweyne Erdogan.
Kumannaan ka mid ah askarta isku dayday afgambiga ayaa is dhiibay, isla markanaa muuqaaladu muujinayaeen iyagoo gacmaha kor u taagaya, kuna sugan biriishka Bosphorus ee magaalada Istanbul, waxaanay dhigeen hubkii ay siteen sida taangiyada iyo dhammaan wixii hub ah ee ay gacanta ku hayeen.
Dawladda Turkiga ayaa hadda ku hawlan in ay millateriga ka sifayso, kana tirtirto dhammaan xubnihii lugta ku lahaa isku dayga afgambiga dawladda Erdogan oo aqlabiyada dadka Turkigu aad u taageersan yihiin.
Sidoo kale, dadka shacabka ah ayaa ka qaybqaatay in ay joojiyaan isku dayga afgambiga, iyagoo aqbalay baaqii Madaxweynaha ee ahaa in ay isugu soo baxaan dalka oo dhan si aan dawladooda loo afgambiyen, halka masaajidaduna ku eedaameen, dadkana ku booriyeen in ay ka hortagaan in ciidammadu la wareegaan awoodda dalka.
Waqtigan xaalada dalka Turkigu waxa ay sida warbaahintu tebinayso ku sugan tahay xasaasi, iyadoo meel kasta ammaankeeda la adkeeyey, shacabkuna aad u muujinayaan taageerada dawladda.